Ukuphupha ngehadi Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Uhadi sisixhobo sakudala kakhulu esihamba nenkqubela yabantu iminyaka eliwaka kwaye safunyanwa kumaxesha amandulo nakwi-Egypt yamandulo. Izandi ezithambileyo zohadi bezisoloko zingumculo omnandi wasemva kwimbutho yasekuhlaleni okanye imvelaphi yesidlo sokutya. Ngeetoni ezihambelanayo, umculo wehabhu uyakwazi ukuthomalalisa nokuzola. Inxulunyaniswa nezulu, iingelosi zihlala ziboniswa ziphethe uhadi ngesandla.
Ngokuchasene noko, ukudlala uhadi kunokwenza abantu boyike ukuba uhlala ubabetha njengomculo ekuthiwa lilifti kwaye awuhambelani nemeko yabo yeemvakalelo ezikhoyo ngoku: nabani na onomsindo kwaye ufuna impikiswano akazokwazi ukuba enze ntoni ngokusebeza izandi. Xa udlalwa kwiokhestra, umculo wehabhu wenza isandi esivumayo, unike wonke umculo weokhestra inqaku elikhethekileyo.
1 Uphawu lwephupha «uhadi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uhadi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uhadi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uhadi» - ukutolikwa ngokubanzi
Uhadi njengophawu lwephupha lubhekisa kwi Uhambo yokuphupha, kweyakhe imeko yemithambo-luvo kunye Imvisiswano okanye ukunqongophala kwemvisiswano phakathi kwakhe nokusingqongileyo. Nabani na obona okanye ova uhadi ephupheni unokuqonda kwisandi ukuba kunjani kuye: umdlalo omnandi nohambelanayo ubonakalisa ukuba uyahambelana naye nabanye.
Ngamanye amaxesha kunokuba ngumqondiso wokuba iphupha likhangela enye. intanda y ukuqonda ibhulukhwe ende. Ukubona uhadi kuthetha ukuwa eluthandweni, ngequbuliso nangentloko, ngelixa uphuphayo, ukuba umamele nje umdlalo, kunokwenzeka ukuba unothando. Umnqweno kunye nomnqweno wokuchukumisa unokuba nayo into enomdla okanye eyokwabelana ngesondo.
Kwelinye icala, ukudlala uhadi ephupheni kuyangxanyelwa okanye kungxolwa, ukuba kuyabenzakalisa iindlebe okanye kungena luvo, oko kuhlala kuyingxaki. uphawu lwesilumkiso: ukuphupha akuziva ukhululekile ngento ethile okanye umntu, imithambo-luvo yakhe iyahlaselwa ebomini bokuvuka.
Uhadi olaphukileyo lumi njengophawu lomlo okanye umlo Ukwahlulahlula phakathi kwabathandi, ukongeza, ungaqhubeka kugula bonisa. Ukuba imitya yaphukile, uphawu lwephupha luphawu lwabantu abafuna ukukulimaza okanye abasele bekwinkqubo yokwenza oko. Ukuba umculo uphindaphindwe kaninzi, uthetha ngemvakalelo yokuba kufuneka uzicenge ngokwakho ukwenza into.
Uphawu lwephupha «uhadi» - ukutolikwa kwengqondo
Njengophawu lwemeko yemithambo-luvo, kodwa nayo ukufa kunye nehlabathi elingaphaya komhlaba, ihadi linokubhekisa emaphupheni kwi-psychic. Ukohlwaya Iingoma. Ukumamela iingoma ezithile ezihambelanayo okanye ukudlala isixhobo ngokwakho uthetha kule ntsebenzo.
Ukudlala uhadi phantse ngokungaqhelekanga kuyaziphazamisa iingxaki zangempela kwaye kuyaziva. Ukuphupha kuya kufuneka uqaphele ubunzima bakho kwaye unonophele ngcono imithambo-luvo yakho. Usenokuba unengxaki yoxinzelelo olungapheliyo, unobangela ekufuneka ufumaneke kwaye ulungiswe.
Ngamanye amaxesha uphawu lwephupha lukwathetha ngento yokuba unguye. uxinzelelo olungafunekiyo lungisa kwaye unakekele izinto ezisonjululwe ngokwenene.
Intabatheko ikwadlala indima kolunye uguquko kutoliko lweli phawu lwengqondo: ke uhadi ephupheni unokwenza ngokungazi. iminqweno yesini kwaye ucebise umnqweno.
Uphawu lwephupha «uhadi» - ukutolika kokomoya
Njengesixhobo seyaya yasezulwini kunye nendalo yayo, uhadi ufuzisela kwinqanaba lokomoya Izinyuko ukuya kumanqanaba aphezulu.
Iphupha malunga neCockroach